ဇီးပင်ကြီးပြဿနာ ဒေါက်တာစိုးသူရဇော်အား စစ်ဆေးခဲ့သူများကို ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းအရ ဆောင်ရွက်သွ?? - Yangon Media Group
ဇီးပင်ကြီးပြဿနာ ဒေါက်တာစိုးသူရဇော်အား စစ်ဆေးခဲ့သူများကို ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းအရ ဆောင်ရွက်သွ??
ဇီးပင်ကြီး ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်အကြောင်း ဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့သည့် ဒေါက်တာစိုးသူရဇော်ကို စစ်ဆေးခဲ့သူများအား ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ပြောသည်။ ဒေါက်တာစိုးသူရဇော် ရေးသားထားသည့်အချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်က တိုင်ကြားစာပေးပို့ခဲ့ ကြောင်း၊ အဆိုပါတိုင်ကြားစာအား ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့ လည်း မိတ္တူပေးပို့ခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါမိတ္တူအပေါ် မူတည်၍ ပြည်သူကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ စုံစမ်းဆေးမှုကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ် ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက နေပြည်တော်၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
”ဝန်ကြီးလည်း မသိဘူး။ ဒုတိယဝန်ကြီးလည်း မသိဘူး။ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် နှစ်ယောက်လည်း မသိဘဲနဲ့ ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာတက်လာ တော့မှ ကျွန်တော်က တွေ့သွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုဖြစ်တာလဲလို့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ အဲဒီကျွန်တော်တို့ဆီကိုပေးတဲ့ အထူကြီးက (ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ဝန်ကြီးထံပေးသည့်စာ)မိတ္တူကို အများကြီးပေးပါတယ်။ ပြည်ထဲရေးကိုပေးတယ်။ အများကြီးပေးတယ်။ တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကို ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီမိတ္တူကို ယူပြီး တော့ သူတို့က ဆက်ပြီးလုပ်တာပါ။ ဒီနေရာမှာ ပြန်ကြည့်ရင် ဒါ တော့ မှားတာပေါ့လေ။ မဟုတ်ဘူးလား။ မိတ္တူဆိုတာ ဘာမှအရေး ယူလို့မရဘူး။ ရေးတဲ့စာကလည်း ဝန်ကြီးဆီရေးတဲ့စာဖြစ်တယ်။ လုပ်လို့မရဘူး။ ဒီဟာတစ်ချက် ဒီဘက်က လိုသွားတာပေါ့နော်”ဟု ဒေါက်တာ မြင့်ထွေးက ပြောသည်။ ဒေါက်တာစိုးသူရဇော်ကိုမူ အရေးယူမှု တစ်စုံတစ်ရာပြုလုပ်မည် မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောသည်။
”ဒေါက်တာစိုးသူရဇော်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ ဘာမှလုပ်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ဖော်ပြပြောဆို ခွင့်ရှိလို့လုပ်တာမဟုတ်လား။ ကျွန်တော်တို့က သူ့ကို ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ အခုလောလောဆယ် ဘာမှလုပ်ဖို့မရှိပါဘူး။ သူ့အလုပ်ပဲ ဆက်လုပ်ဖို့ အလုပ်ပဲကြိုးစားဖို့ ပြောထားပါတယ်။ သူလည်း ကြိုးစားပြီး လုပ်နေပါတယ်”ဟု ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးက ပြောသည်။ အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၎င်းအနေဖြင့် တစ်စုံတစ်ရာ ညွှန်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဆက်လက်ပြောသည်။ ”ဒီလိုဟာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့က လမ်းညွှန်ချက်ထုတ်ပြန်မယ်။ ဒီဌာနတစ်ခု တည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ အခြားဌာန တွေရော သူတို့လည်းသိပါတယ်။ သူတို့လည်း လွတ်သွားတာပေါ့။ မိတ္တူကို အရေးယူလို့မရဘူးပေါ့ လေ။ ဒါဝန်ထမ်းတိုင်းသိတယ်။ ကော်ပီဆိုတာ အရေးမယူရဘူးဆိုတာ သိဖို့ပဲပေးတာ။ ဆက်လုပ် စရာဘာမှမလိုဘူး။ အမိန့်မကျ လာမချင်း လုပ်လို့မရဘူး”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ယင်းအပြင် ဒေါက်တာစိုးသူ ရဇော်အား ဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ် ဆေးမှုပြုခဲ့သူများအားလုံးကို လက်ရှိအချိန်တွင် ခေါ်ယူမေးမြန်းနေ ကြောင်း ဝန်ကြီးကဆိုသည်။ ”ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကို ဒီနေ့နံနက် ပဲ ခေါ်မေးပါတယ်။ ဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ မေးတယ်။ ထပ်ပြီးတော့ တစ်ဦးချင်းလည်း ထပ်မေးနေပါတယ်။ အဲဒီ ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ ဝန်ထမ်းစည်း မျဉ်းအရ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ လုပ်မှာပေါ့လေ”ဟု ဒေါက်တာ မြင့်ထွေးက ပြောသည်။ မိုးကုတ်မြို့နယ် သွားကျန်းမာရေးဦးစီးအရာရှိ ဒေါက်တာ စိုးသူရဇော်သည် ဇီးပင်ကြီး ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်တွင် တက် ရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ရေးသားခဲ့သဖြင့် မန္တလေးတိုင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့ကာ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝ ရက်က စစ်ဆေးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ် ကြောင်း ဒေါက်တာစိုးသူရဇော်က ပြောကြားထားသည်။
ဇီးပင်ကြီးတက္ကသိုလ်၌ ဌာနမှူးတစ်ဦးက စာသင်ကြားရာတွင် ”ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး မအောင် မြင်နိုင်ခြင်းသည် လက်ရှိ ဒီချုပ်အစိုးရ စေတနာမပါသဖြင့် မအောင် မြင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း” စသဖြင့် သင်ကြားခဲ့ကြောင်း ဒေါက်တာစိုးသူရ ဇော်က လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ တွင် ဇီးပင်ကြီးစစ်တမ်းခေါင်းစဉ် ဖြင့် အပိုင်းသုံးပိုင်း ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ဆေးပညာရပ်ဝန်းမှ ဒေါက်တာစိုးသူရဇော်အား ထောက်ခံကြောင်း လက်မှတ်များကို ကောက်ခံလျှက်ရှိပြီး နိုင်ငံ တော်သမ္မတနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်တို့ထံ ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကမ်ပိန်းဦးဆောင်သူများက ပြောကြားထားသည်။
မန္တလေးမြို့တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့် အမှုရင်ဆိုင်နေရသည့် အဆိုတော်ရသ အပါအဝင် သုံးဦးအမှု ဒီဇင
မွန်လူမျိုးအလိုက် အမျိုးသားအဆင့် သုံးရက်တာဆွေးနွေးပွဲ ပြီးစီး၊ ကဏ္ဍအလိုက် အဆိုပြုချက်များြ